Shina Manokana amin'ny famokarana voninkazo zaridaina mpanamboatra harato mpanamboatra sy ny mpamatsy | Kede Netting
Mpanamboatra ambongadiny hig...
Anti-bird net edge manu...
Miavaka amin'ny vokatra...
harato tsy misy vovoka tsara kalitao...
Manampahaizana manokana amin'ny famokarana mpanamboatra harato fambolen-kazo
Ny harato zaridaina dia karazana fitaovana toy ny lamba tenona amin'ny tariby fisaka UV-mahatohitra PP (polypropylène). Araka ny lokony dia azo zaraina ho mainty sy fotsy. Araka ny tontolo iainany dia azo zaraina ho karazany roa izy io: fampiasana anatiny sy ivelany.
Ny harato zaridaina dia karazana fitaovana toy ny lamba tenona amin'ny tariby fisaka UV-mahatohitra PP (polypropylène). Araka ny lokony dia azo zaraina ho mainty sy fotsy. Araka ny tontolo iainany dia azo zaraina ho karazany roa izy io: fampiasana anatiny sy ivelany. .
Ny endri-javatra lehibe indrindra amin'ny lamba vita amin'ny zaridaina dia manana rafitra voatenona izy (mba hiantohana ny fahafahan'ny rano) sy ny loko (tsy mangarahara). Amin'izany fotoana izany, ny fitaovana dia tokony hanana ambaratongam-panafihana, fanoherana UV ary fanoherana ny bobongolo. Ho an'ny lamba tany ivelany, ny heriny dia tokony ho afaka misoroka ny bibikely sy ny biby madinika sy salantsalany.
Misoroka ny ahi-dratsy amin’ny tany. Satria ny lamba vita amin'ny tany dia afaka manondraka mivantana ny tany avy amin'ny masoandro (indrindra fa ny lamba mainty mainty), ary miaraka amin'izay koa, ny rafitra matanjaka amin'ny lamba vita amin'ny tany dia manakana ny tsimparifary tsy handalo amin'ny tany, ka miantoka ny fiantraikan'ny tany. lamba amin'ny fitomboan'ny tsimparifary.
Sasao ara-potoana ny rano amin'ny tany mba hadio foana ny tany. Ny fampandehanana drainage ny lamba tany miantoka ny tatatra haingana ny rano ambonin'ny tany, ary ny vatokely sosona sy ny afovoan-fasika sosona ambanin'ny tany lamba afaka tsara manakana ny mivadika ny poti-tany, ka miantoka ny fahadiovan'ny tany lamba ambonin'ny.
Manampy amin'ny fitomboan'ny fakan'ny zavamaniry izany ary misoroka ny lo ny fakany. Io vokatra io koa dia azo avy amin'ny firafitry ny fametahana tenona amin'ny lamba vita amin'ny tany, izay afaka miantoka fa tsy miangona ny fakan'ny voly, ka ny rivotra amin'ny fakany dia manana mari-pahaizana manokana, ka misoroka ny fako.
Misoroka ny fitomboan'ny fakan'ny voninkazo ao anaty vilany ary manatsara ny kalitaon'ny voninkazo. Rehefa vita amin'ny lamba vita amin'ny tany ny voninkazo vita amin'ny vilany, ny lamba vita amin'ny tany dia afaka manakana ny fakan'ny voly ao anaty vilany tsy handalo ny fanambanin'ny vilany ary mihady ao anaty tany, ka hiantoka ny kalitaon'ny voninkazo.
harato (mm) 10,12,15, namboarina
Halavany (mm)　 100,140
sakany (mm) namboarina
Paramètre tanjaka Hery manapaka: 455N
Fahatapahan'ny elongation: 33.5cm
Fotoana fiatoana: 23.05s
● Ny harato dia misy fatotra mafy ary tsy mirodana;
● Mora ampiasaina ary mora miparitaka;
● Manana fiainana lava be.
teo aloha: Mpanamboatra harato fihanihana zavamaniry sy voly
Manaraka: Manakana ny tara-masoandro sy ny maripana ambony ny mpanamboatra harato aloka avo lenta
Anti Bird Garden harato
Anti-Hail harato ho an'ny zaridaina
Fambolena voajanahary harato
harato fanaovana zaridaina ho an'ny zavamaniry
Shade Net ho an'ny Terrace Garden